Air Astana dia manohy ny sidina iraisam-pirenena
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Astana dia manohy ny sidina iraisam-pirenena
rivotra astana a320
Air Astana dia hanohy ny serivisy iraisampirenena manomboka any Almaty sy Nur-Sultan ka hatrany amin'ny toerana itodiana any Georgia, Korea Atsimo ary Torkia eo anelanelan'ny 20 taonath Jona sy 1 Jolay 2020.
20th Jona - Almaty-Antalya-Almaty
20th Jona - Nur-Sultan-Istanbul-Nur-Sultan
21st Jona- Almaty-Istanbul-Almaty
21st Jona - Nur-Sultan-Antalya-Nur-Sultan
23rd Jona - Atyrau-Istanbul-Atyrau
1st Jolay - Almaty-Tbilisi-Almaty sy Almaty-Seoul-Almaty *
Ho fanampin'izay, ny seranam-piaramanidina dia hanangana serivisy vaovao tanteraka avy any Almaty ka hatrany Batumi any amin'ny morontsirak'i Black Sea any Georgiard Jolay.
Ny sidina iraisam-pirenena dia hiasan'ny fiaramanidina Airbus A320 / A321 sy Embraer E190-E2 amin'ny ankapobeny
Nanohy ny sidina teo anelanelan'ny Almaty sy ny renivohitra Nur-Sultan ny Air Astana tamin'ny 1st Mey ary nanitatra ny tambajotra anatiny mba hampiditra ireo ivon-toerana manerana an'i Kazakhstan amin'ny tapaky ny Mey.
Ireo mpandeha tonga avy any Georgia sy Korea Atsimo dia handalo fanaraha-maso mafana ary mila mameno ny fangatahana fangatahana fahasalamana rehefa tonga any Kazakhstan. Ireo mpandeha tonga avy any Torkia dia hanao fizahana ara-pahasalamana, mila mameno ny fanontaniana momba ny fahasalamana ary fitsapana COVID-19 ao anatin'ny 48 ora aorian'ny fahatongavany, raha tsy aseho eo noho eo.
Mpikambana ao amin'ny delegasionam-panjakana avy any Kazakhstan, mpikambana ao amin'ny delegasiona ofisialin'ny fanjakana vahiny ary fikambanana iraisam-pirenena tonga ao Kazakhstan amin'ny fanasan'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny; mpikambana ao amin'ny iraka diplaomatika, biraon'ny consular ary iraka ataon'ny fikambanana iraisam-pirenena nahazo fankatoavana an'i Kazakhstan, mpikambana ao amin'ny fianakaviany sy ny ekipa fiaramanidina rehetra dia voahilika tsy ho takiana amin'izany fepetra izany.
Ireo mpandeha mandeha any ivelany dia asaina manamarina ny fepetra takiana amin'ny fahasalamana any amin'ny firenena hiaviany.
Barometre fiarovana momba ny dia lavitra: famantarana mamporisika ny dia amin'ny fahavaratra
Tapitra ny fialantsasatra tsy ara-dalàna any Carbon Nation Cult Leader any Hawaii